Yoga Mat Factory - China Yoga Mat Abenzi, abahlinzeki
Incazelo: Njengoba inezinhlangothi ezimbili ezingahambisani namacala, ibhalansi evela ekuvivinyweni kwe-premium yenhloso yonke, i-yoga mat iza nethuba elihle kakhulu lokumelana nokushibilika ukuvimbela ukulimala.Ubukhulu obukhulu be-NBR yoga mat kahle bufaka umgogodla, okhalweni, amadolo nezindololwane phansi okuqinile ngenkathi ikugcina ulinganisela.
IMult-Purpose Mat: Umata we-premium olungele zonke izinhlobo zokuqina nokuzivocavoca umzimba okubandakanya i-yoga, ama-pilates, nanoma yikuphi ukuzivocavoca phansi lapho kudingeka khona isiguqo nokusekelwa okwengeziwe.
Okungekho Slip Mat: Ifakwe indawo engasheleli efanelekile kuma-junkies ejimi akuthanda kakhulu ukusebenzisa kwabo. I-yoga-mat yohlelo lokuzivocavoca lwe-all-purpose iza nenzuzo enhle kakhulu yokumelana nokushelela ukuvimbela ukulimala.
Ukuqina Okumangalisayo: Ukuzivocavoca umzimba kwethu kukuvumela ukuthi ugcine ibhalansi yakho nganoma yisiphi isitayela sokuzivocavoca. Ubuchwepheshe obumelana nomswakama benza umata ulungele amajezi asindayo futhi ungagezwa kalula ngensipho namanzi amancane.
Izinto ezingezona ezinobuthi: Kwakhiwe okokusebenza kwe-NBR okuyindlela enhle enempilo kuwe nasemvelweni. I-NBR ayinamanzi futhi iphethe ukuma kahle. Kulula ukuwasha okwenza ikulungele ukuzivocavoca ngaphakathi noma ngaphandle.
Osayizi: Osayizi abahlukahlukene baqinisekisa induduzo kubantu bazo zonke izinhlobo nobukhulu. Ngobuningi begobolondo elinamandla amakhulu, ubukhulu obuningi be-premium mat buhlala kahle emgogodleni, okhalweni, emadolweni nasezindololwaneni phansi.
Imininingwane Esheshayo Indawo Yemvelaphi Jiangsu, China Igama Lombhalo ENGINE Inombolo Yesibonelo PE yoga mat 173 * 80 * 0.6 cm Monochrome embossing Type Yoga mat Length 173 cm Material PE Igama lomkhiqizo: PE yoga mat 173 * 80 * 0.6 cm Monochrome embossing Feature Feature Non-slip / I-Gymnastics Yokusebenzisa Ehlala Isikhathi Eside / Engahlanjululwa Umbala Ngokwezifiso Usayizi Wombala Ngokwezifiso Usayizi Ilogo Ilogo egcizelelekile I-MOQ 1 pc Ukupakisha i-OPP Bag + Carton / Customzied 3mm-10mm Imininingwane Yesikhathi Sokulethwa ...
PU + Yemvelo Rubber Yoga Mat
Imininingwane Yezinto: Uhlangothi oluphezulu - isikhumba se-ployurethane (PU), uhlangothi olungaphansi - injoloba yemvelo. Umata wethu wokuzivocavoca we-5mm obukhulu wenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu nenjoloba yemvelo, okungasheleli kanye nephunga elincane. Yenziwe ngenjoloba yemvelo eyi-100%, le mathi ye-PU yoga engasheleli ayinabuthi futhi iyakwazi ukuphinda isebenze. Ukuthungwa okuhlukile kwe-anti-slip kuqinisekisa ukubambelela okuhle nganoma yiluphi uhlobo lwesitezi, kukusiza ukuthi uhlale uzinzile futhi ulinganisele.
Eco Fnolaka: Ihlukile ngomata wendabuko we-PVC, i-NBR ne-EVA yoga mat, le phayiphi ye-PU ye-premium yenziwe ngerabha wesihlahla semvelo ongabuthi onobuthi, i-PVC mahhala futhi ayinaphunga eliqinile njengamanye amacansi e-foam. Kuyinto eco-friendly ngempela, enempilo futhi kabusha, ephelele phansi yoga umzimba mat pads for ekhaya ukusebenzisa.
Nisikhumba se-PU esishelelayo: Rubber yoga mat with PU surface is non-slip ngisho nangesikhathi sokwenza izithukuthuku ngenxa yokumunca umswakama ophezulu, ilungele i-yoga eshisayo.
Imisebenzi eminingi yeYoga: Le mathi ehlala isikhathi eside ye-yoga yakhelwe ukumelana nezinhlobonhlobo zokuvivinya umzimba, njenge-Ashtanga, i-Vinyasa, i-Power, i-Hatha, i-Bikram, i-yoga eshisayo, ama-Pilates, i-Barre, njll. Kuyimali enhle impela empilweni yakho.
Osayizi Iyatholakala: Singanikeza osayizi abajwayelekile, abanjengo-183 * 61 * 0.4cm, 183 * 61 * 0.5cm, 183 * 68 * 0.4cm, 183 * 68 * 0.5cm. Ngaphezu kwalokho, sinesevisi yangokwezifiso, ngakho-ke ungakhetha abanye osayizi obafunayo.